Narrator's Voice 7.7.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.7.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Narrator's Voice
Narrator's Voice ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပြောပေးမယ့် Voice ကို app ကိုသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဇာတ်ကြောင်းပြောရဲ့အသံကို အသုံးပြု. ထညျ့မက်ဆေ့ခ်ျများဖန်တီးမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာအဘာသာစကားကို, အသံများနှင့်သုံးစွဲဖို့ app ကိုများအတွက်မဆိုအထူးသက်ရောက်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပြောတတ်သို့မဟုတ်ရိုက်ထည့်ပါ။
ဗီဒီယိုဇာတ်ကြောင်းပြောရှင်းပြဒါမှမဟုတ် screen ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ရဲ့သမျှအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ခွင့်, ပြောပေးမယ့် Voice ကိုများအတွက်အပူဆုံးစီမံကိန်းများတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ တကယ်တော့လူအတော်များများကသူတို့ကိုခြုံငုံဗီဒီယို၏ဦး Vibe ပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့ကွဲပြားသောစကားသံပေးခြင်း, ၎င်းတို့၏ YouTube ဗီဒီယိုအသံဖိုင်ထည့်ဖို့ပြောပေးမယ့် Voice ကို app ကို အသုံးပြု. ပါပြီ။
နေဆဲပုံများ, ဆလိုက်ရှိုးများ, E-သင်ယူမှုစီမံကိန်းများ, ဒါမှမဟုတ်အသုံးဝင်သောခကျြသို့မဟုတျရှင်းလင်းချက်မှအကျိုးနိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးထက်နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ, ညီတူညီမျှအောင်မြင်သောနိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူ့တိရစ္ဆာန်စုထဲမှာမျှဝေထားပါသည်။ သန်းနဲ့ချီတဲ့က အသုံးပြုနေသည်နှင့်များစွာသောကစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။
=== === အင်္ဂါရပ်များ
•လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အသံဖိုင် MP3, သို့မဟုတ်ဗီဒီယို, MP4 နှင့်ရှယ်ယာမှစာသားကိုပြောင်း
• Audio / Video ဖိုင်အဖြစ်ဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်သောစာသားဖိုင်, ကျယ်လောင်စွာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပို့ကုန် / ရှယ်ယာစာသားကို။
•အကောင်းဆုံးအသံမှစာသားနဲ့ မိန့်ခွန်းမှစာသားကို (၏ TTS) App ကို
• pinksheep စကားသံကို (ပန်းရောင်သိုး), MLG စကားသံကို Include - ဒံယလေဗြိတိန်, Cortana စကားသံကို နဲ့အခြားသူများကို ...
•ကို YouTube ကအကြံပြုထား [သူတို့ဒီ app ကိုအသုံးပြု]
• audio က ကယ်တင်ပြီးနောက်အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်
• YouTube ချန်နယ် အဘို့ဂရိတ်
✪အကောင်းဆုံး Text-to-speech ၏ TTS ✪
Narrator's Voice အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Narrator's Voice အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Narrator's Voice အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Narrator's Voice အား အခ်က္ျပပါ
appsapksjuegosparaandroid စတိုး0471
Narrator's Voice ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Narrator's Voice အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.7.0
ထုတ်လုပ်သူ Escolha Tecnologia
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.escolhatecnologia.com.br/privacy-policy/narrators-voice-privacy-policy.html
App Name: Narrator's Voice
Release date: 2019-08-10 00:47:24
လက်မှတ် SHA1: 97:BA:9E:49:18:7E:A9:F3:77:BF:6E:64:5D:C7:F2:96:51:50:D1:33
အဖွဲ့အစည်း (O): escolhatecnologia
နယ်မြေ (L): sp
Narrator's Voice APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ